Sajhasabal.com |सुर्खेत: बालवालिकाहरुलाई पुर्नस्थापनामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता
सुर्खेत: बालवालिकाहरुलाई पुर्नस्थापनामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता
माघ १७, सुर्खेत । सुर्खेतमका विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले अपाङ्गता भएका बालवालिकाहरुलाई पुर्नस्थापनामा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
बुधवार विंग्स फाउण्डेशनको परिचयात्मक कार्यक्रममा डा. केसीले सुरु गरेको न्यानो सुर्खेत अभियानको समेत सह्राना गर्दै उनीहरुले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
डा.केसीले विगत १ वर्षदेखी विंग्स फाउण्डेशन मार्फत बालबालिकाहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच, न्यानो कपडा वितरण र स्टेशनरी सामग्री प्रदान जस्ता विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
कार्यक्रममा डा.केसीले अवका दिनमा समाजमा कुनैपनि कारणवाट अपाङ्गता भएका बालवालिकाहरुलाई पुर्नस्थापना गर्नका लागि सरोकारवालाहरु एक जुट भई काम गर्नुपर्ने वताए। उनले १ वर्षको अवधिमा विंग्स फाउण्डेशन नेपालमा १ सय २८ जना बालबालिकाहरु आएको वताए ।
बुधवार संस्था परिचय कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालगायत सरोकारावाला पक्षहरुले अपाङ्गताभएका बालबालिकाहरुको लागि थालिएको कामलाई सक्ने सहयोग गर्ने बचन दिएका छन् ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदी, जिल्ला शिक्षा कार्यालयका भोजप्रसाद लम्साल, सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष नारायण कोइराला, विश्व स्वास्थ्य संगठनका डा. दिपेश श्रेष्ठ, मप क्षेत्रीय अस्पतालका डा. रुपक कँडेल, वातावरण सहकारीका अध्यक्ष तेजप्रसाद पौडेललगायतले गच्छे अनुसारको सहयोग गर्ने बचन दिएका छन् ।
डा. केसीले सुर्खेतका विपन्न बस्तीहरुमा पुगेर बालबालिकाहरुको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन गरी स्वास्थ्य जाँच गर्नुका साथै न्यानो कपडा पनि वितरण गर्ने गरेका छन् ।
उनले अति विपन्न बालबालिका र त्यसमा पनि अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको लागि आफूले फाउण्डेशनको स्थापना गरेको बताए ।महिला तथा बालबालिका कार्यालयको नीतिभित्र रही अति विपन्न, आमा बाबु नभएका बालबालिकाहरुलाई स्टेशनरी प्रदान गरिने विंग्स फाउण्डेशनका सचिव किरण बस्नेतले बताए ।
उक्त अभियानबाट वराहताल गाउँपालिकाको अतिविपन्न समुदायको बसोबास रहेको वडा नं. १, २, ३, ४, ९ र १० मा स्वास्थ्य शिविर र स्टेशनरी वितरण गरिसकिएको उनले जनाए ।